Iipaki kunye nokuKhangela | Tyelela uHultsfred
Iindawo kunye nexesha lokubonakalisa
Ukutya kuye kwakhiwa kwakhona ngokuphefumlelwa kwendalo ngomthi kunye nehlathi njengomxholo kwaye kufakelwe iindawo eziluhlaza ezintsha, ukukhanya okukhuselekileyo okutsha, iindawo zomsebenzi ezilula
Kwindawo yeNkampani kukho igadi yemifuno emnandi kakhulu enee-150 ezahlukeneyo, iintyatyambo zasehlotyeni kunye nezikhula ixesha elide.
Ipaki eseHultsfred isemoyeni womculo, apho abafundi baseLindblomskolan bazobe imizobo njengeziphakamiso zento abafuna ukuba ibonakale. Ecaleni kwepaki kukho iinkundla zeeboules kunye neendawo ezintle eziluhlaza.
IHagadalsparken ifumene inyuselo lokwenyani kunyaka ophelileyo kwaye ngoku iyafikeleleka kwaye ikhuselekile kunangaphambili. Isiziba esenziwe ngumntu
Apha uya kufumana igadi yemifuno, iibhedi zeentyatyambo ezingapheliyo, igadi yegolide, igadi yeziqhamo, indawo yokutya kunye nekofu kunye nentengiso yezityalo. Igadi iqhutywa ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo, owaqalwa ngo-2004 liqela labathandi
Misterhultsutsikten, Ummandla weenduli zommandla uthetha ukuba zininzi iindawo ezintle zokujonga. Enye yeembono ezintle onokuzifumana kuMisterhultsberget ngaphandle kweVirserumssjön nge